Sihlaziya umehluko phakathi kwe-iPhone 6 ne-iPhone 7 kule vidiyo | Izindaba ze-IPhone
ULuis del Barco | | iPhone 7
Kubukeka ngathi izolo lapho ngiya kwa-Apple Store eRio Shopping ngo-8 ekuseni ngolunye usuku ngo-Septhemba 2014 ngiyothenga i-iPhone yami entsha 6. Lapho ngikuqonda okokuqala ukuthi i-Apple ifuna ukusitshela ukuthi lena kwakuyi-iPhone ehamba phambili kuze kube manje. usuku. Iqiniso ukuthi sekudlule iminyaka emibili kusukela lapho nokuthi sine-iPhone entsha. Idivayisi engekude kakhulu kunaleyo ethulwe lapho uma sikhuluma ngengxenye ebonakalayo, kepha lokho kusungula umehluko ongemuhle kwezinye izingxenye.
Futhi kunjalo yize kungahle kubonakale sengathi i-iPhone 7 iwuhlobo lwe "rehash" yi-Apple, izinguquko zingatholakala kuwo wonke amazinga, okwenza le iPhone ibe yithuluzi eliphelele ngokweqile. Namuhla sibona umehluko ophawuleka kakhulu kithina, abasebenzisi.
1 Inkinobho? ekhaya
2 Cindezela kanzima
4 Khomba bese udubula!
5 Sengizobona, 16GB
Kuyaxaka, kuyaxaka, kuyaxaka. Sonke savumelana okokuqala lapho sibeka umunwe wethu kunkinobho entsha yasekhaya ye-iPhone 7. Kunzima ukuchaza umuzwa owukhiqizayo ngemuva kweminyaka eminingi ujwayele "ukuchofoza" okungokomzimba. Kepha kuyaxaka ngendlela enhle, ngoba lowo mbono wokuqala uyanyamalala emahoreni ambalwa nje, ukuguqula ama-lathes nokushaywa kweminye imodeli kubukeka kungajwayelekile. Ushintsho oludingekayo ukuze ukwazi ukuqinisekisa ukumelana kwamanzi ne-IP67 okushiwo yileli thinali nokuthi, ngaphezu kwalokho, lenza ukushukuma komzimba okufana nokwenza imisebenzi eminingi ngokushesha ukwenza
Njengoba kubonakala, I-iPhone 7 ifaka i-ID yesizukulwane sesibili, okusho ukuthi ukuvula i-iPhone yethu ngeminwe yeminwe kushesha kakhulu kune-iPhone 6.
Enye yezinto ebonakala ingaka uma ungenayo, kepha lokho kwenza umehluko omkhulu. Ezinsukwini zami zokuqala nge-iPhone 7 umuzwa uthi "ngiphile kanjani ngaphandle kwe-3D Touch". Ihaba, kepha iphumelele ngasikhathi sinye. Ukuhlanganiswa kwe-3D Touch ohlelweni manje sekuqediwe ukwedlula lapho sakwazi ukukuhlola kuma-6s futhi, ngaphandle kokungabaza, kuyinto ozoyithokozela uma uvela ku-iPhone 6.
I-RAM ingenye yalezo zinto ongakaze ucabange ngazo uma une-iPhone, ngoba uthatha kalula ukuthi izosala kunoma yini enayo ngaphakathi. Futhi kuyiqiniso kuze kube seqophelweni. Hhayi ukuthi i-iPhone 6 "imbi" nge-1GB ye-RAM, kepha ukuvala izinhlelo zokusebenza ngemuva nokulayisha imidlalo kwesinye isikhathi kungakhathaza. Ku-iPhone 7 khohlwa mayelana nokulayisha kabusha izinhlelo zokusebenza njalo lapho uzikhipha, ngoba sibonga i-2 GB ye-RAM engeke isaba yinkinga futhi. I-chip entsha ye-A10 fusion nayo inengxenye enhle yecala lokwenza i-iPhone 7 izwe njengemoto enganqandeki, ikakhulukazi uma uqhamuka kwi-iPhone 6, ngoba lokhu kushesha kabili kune-A8 yayo.
Khomba bese udubula!
Ikhamera ye-iPhones ayikaze ibe nezincazelo ezinhle kakhulu ephepheni, kepha ibilokhu iphakathi kwemiphumela emihle kakhulu. Nge-iPhone 7 ayikho ngaphansi futhi, noma ukusetshenziswa kwansuku zonke ngeke kusimangaze umehluko uma kuqhathaniswa no-6, uma uthanda ukuthatha izithombe bese uthwebula amavidiyo nge-iPhone yakho, uzowubona umehluko. Phakathi kokuvelele esikuthola kulesi sigaba njengezici ezahlukanisayo kukhona: ama-megapixels ayi-12 ekhamera engaphambili kanye no-7 ngaphambili, ngokungafani nama-megapixel angama-8 no-1.2 we-iPhone 6, ngokulandelana. Futhi, futhi lokhu kuyinto esingayitholi kuma-iPhone 6s, kuphoqelekile ukuthi sisho isiqinisi sesithombe se-optical, esifakwe okokuqala ngqa kumodeli we-4,7-intshi.
I-Apple's taboo phakathi nale minyaka, i-16GB yokugcina kumodeli eyisisekelo yamatheminali ayo, inyamalala kulo nyaka - bekuyisikhathi - sokunikeza indlela i-32GB. Manje yebo, imodeli yokungena izokwazi ukuphendula inani elikhulu labasebenzisi okungeke kudingeke ukuthi bathenge imodeli ngamandla amakhulu okugcina bechitha uhhafu.
Ngokuyinhloko kulokhu, kodwa futhi neminye imininingwane esikutshela yona ekubuyekezweni kwe-iPhone 7, ushintsho olusuka ku-iPhone 6 luye ku-7 lufanelekile. Okunikelayo kuningi, yize kubonakala kufihliwe ekuqaleni. Ukuthi alukho ushintsho olukhulu ekwakhiweni kwangaphandle akusho ukuthi bekungekho kukho konke okunye.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 7 » IPhone 6 vs. I-iPhone 7: ukuhlaziywa kwevidiyo ngokungafani kwabo
I-iPhone 7 ibukeka ingathi nsundu kimi kune-iPhone 6 no-6 plus kanye nama-S variants abo bebevele bekhona, kepha futhi kuyifoni okuwukuphela kwento engakulethela uketshezi, ngoba akudingeki ukuthi uxhume ama-headphone noma i-micro sd , hhayi i-infrared, hhayi izinto eziyisigidi kunamanye amadivayisi abiza kancane kakhulu. Futhi ayinayo ikhamera evelele, imane nje iyathobela kepha bese ubheka ukuthi ifoni ibaluleke ngani bese ubona uhlobo olujwayelekile lwe-32 GB (Nginama-gig angama-32 afushane kimi) futhi uyabona ukuthi kubiza ama-800 ama-euro ... futhi awukwazi ukuphika okusobala, le telefono ukuphanga okusabisayo, futhi abalandeli be-apula kuphela abangaliphika.
Izibuko ezikhulisayo kusho
Kuyafaneleka uma usebenzisa i-iPhone ukwenza i-aerospace computing, ngaphandle kwalokho kungcono ukuhlala nabayi-6 futhi ube ne- € 800 kune-WhatsApp esebenza ngokufanayo!
"Umhlaba unuka ubhuqu"
Onjiniyela manje sebengathenga ukukhangisa ku-App Store
Iphupho elibi lakwaSamsung liyaqhubeka: I-Galaxy Note 7 "yomshwalense" ishisa eChina